[84% OFF] Kuubanada Taayirka Kanada & Koodhadhka Foojarka
Canadian Tire Xeerarka kuubanka
Lacag Qaadis Dhinac Bilaash ah Soo hel 40 kii ugu dambeeyay ee koodhadhka xayeysiinta Tire -ka Kanadiyaanka, rasiidhyada, qiimo -dhimista Ogosto 2021. Ka hel 35% Ka -iibinta canadiantire.ca.
Badbaadinta Ilaa 50% On nadiifinta Taayirada Kanada waxay kaloo bixin doontaa qiimaha ugu wanaagsan waxyaabaha kale ee daruuriga ah sida qalabka yar -yar, elektaroonigga, qurxinta, dharka, iyo waxyaabo kaloo badan. Fiiri rasiidhada ugu sarreeya ee Canadia Tire maanta oo ku keydi badeecadaha sumadaha sare sida Mastercraft, CANVAS, Paderno, Fan Zone, NOMA, iyo inbadan.
Ku keydi ilaa 75% Qiimaha Kuleylka Canadian Tire waxay ku iibisaa kaararka hadiyadaha $ 10, $ 25, $ 50 iyo $ 100 websaydhkooda. Kaararka hadiyadda waxaa laga iibsan karaa in ka badan 500 dukaan oo tafaariiqda ah, 490 xarumood oo adeegga baabuurta ah, iyo 300 goobood oo Canadian Tire Gas+ ah oo dalka oo dhan ah. Sideen qiimo -dhimis uga heli karaa Taayirada Kanada?
$ 25 Canadian Tire Money & Free Box Gift Box Markii aad Dalbaneysid Kaarka Deynta Saddex-xagalka Canadian Tire waa shabakad sii kordheysa oo ah ganacsato isku xiran oo ku hawlan tafaariiqda, adeegyada maaliyadeed iyo gaaska. Canadian Tire waxay hoy u tahay dhammaan waxyaabaha maalin kasta kaa caawin kara inaad shaqayso, ciyaarto, oo aad si fiican u noolaato. Maanta dalabyada ugu sarreeya ee Canadian Tire ayaa bixiya: